Ophrojusa abaqaphele abakwenza kwiTV
UMUSA Mseleku othula uhlelo uMnakwethu kwiMzansi Magic
NOKUBONGWA PHENYANE | March 4, 2020
SEZIZININGI izinhlelo ezikhuluma ngempilo yangempela kwithelevishini okusolwa ukuthi zithenga abantu abazolingisa.
Lokhu kwenzeka kakhulu ezinhlelweni ezintsha ophrojusa bazo abasuke bezithula ukuze babone ukuthi zizothakaselwa yini.
Ngesonto eledlule kuveze ukuthi okwenziwa ohlelweni oluthi Mnakwethu kuyinganekwane.
Uhlelo lukhombisa owesilisa eyocela kumkakhe ukuthatha isithembu.
Indoda yawakwaMaphumulo ezibiza ngoDulas, ilikhiphile iqiniso yathi yona nabesifazane akade kuthiwa ithandana nabo bebezenzela nje ukuze baqophe isiqephu bese bekhokhelwa imali.
Lokhu kuphinde kwaqinisekiswa wuninakhulu womunye wabesifazane abebevelile othe yena ngokwazi kwakhe umzukulu wakhe akashadile.
Yize ophrojusa abasathuthuka bezinhlelo ezehlukene ezifuze uMnakwethu befuna ukukhombisa ngempilo eyenzeka emhlabeni esiphila kuwo kodwa kumele bacabangele isiteshi abasuke bezosinika umsebenzi wabo ngoba izikhulu zaso zisuke sibathemba ngabazokuletha, okuzokwenza isiteshi sithakaselwe futhi sithole inzuzo ngokubukwa.
I-Moja Love ike yangena ehlazweni elifanayo ngonyaka odlule kuvela ukuthi uhlelo obelwethulwa uJub Jub oluthi Uyajola 9/9, bebeqamba amanga abavela kulo, konke bebekwenza ngoba bekhokheliwe.
Ayiyinhle neze inkohlakalo eyenziwa wophrojusa.
Ngokolwazi enginalo, isiteshi samukela izicelo eziqhamuka ezinkampanini ezehlukene, ophrojusa abasakhula abasuke befuna ukufaka izinhlelo zabo abafuna zibonwe kwithelevishini.
Uma isiteshi siwuthandile umdlalo noma uhlelo iziphathimandla zesiteshi ziyaye zinxuse ophrojusa ukuthi abaqale baqophe iziqephu ezimbalwa bese beziletha kubo ukuze zizibona ukuthi zamukeleka kanjani. Baziqedela uma sezikhonjisiwe iziqephu ezimbalwa.
Kodwa kuyacaca ukuthi iningi lokuvezwe wophrojusa bohlelo uMnakwethu kungamanga. Lokhu kufakazelwa wukuthi kuvele inqwaba yabaculi bakamaskandi abebekade bebacela. Ngenxa yokuthi nabo abadumile kanti bafuna ukuzithuthukisa kwezomculo bese beyavuma.
Ophrojusa abaqaphele ukuthi abakwenzayo kungase kuvalele amathuba abantu abeza nezinhlelo ezingasiza futhi zifundise lukhulu emphakathini.
Okunye okungenzeka wukuthi lokhu kungehlisa ukwethenjwa kwesiteshi nesithunzi saso sehle.
KuMnakwethu akumosheki nje isithunzi soMzansi Magic kodwa nesikamethuli wohlelo, uMusa Mseleku.